ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း နည်းလမ်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော်လည်း လျစ်လျူရှု သွေဖည်ပါက ဒီမိုကရေ? - Yangon Media Group
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း နည်းလမ်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော်လည်း လျစ်လျူရှု သွေဖည်ပါက ဒီမိုကရေ?
”ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များနဲ့အညီ အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ဆွေး နွေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း နည်းလမ်းများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာနိုင်ဖို့ လမ်းဖွင့်ထားတာဖြစ်လို့ ဒီလမ်းကြောင်းများကို လျစ်လျူရှုကြ၊ သွေဖည်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆီသို့ ဦးတည်ရမယ့် ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းရာမှာ ကြန့်ကြာနေဦးမှာ ဖြစ်သလို အချိန်ကာလ ကြာမြင့်လေလေ နိုင်ငံ တော်နဲ့ ပြည်သူများရဲ့ လူမှုအကျိုးစီးပွားဘဝ များဟာလည်း နိုင်ငံတကာနဲ့ ပခုံးချင်းယှဉ်နိုင်ဖို့ ဝေးကွာနေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောသည်။
NCA စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကျန်ရှိနေသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက် နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းသီးသီးတို့ကိုလည်း ဆက်လက် ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြရန် လက်ကမ်း ကြိုဆိုလျက်ရှိကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် NCA စာချုပ်ပါ သဘော တူညီချက်များသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ် ဖွဲ့ထဲမှ ရေးဆွဲထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကနဦးအဆိုပြုချက်များပေါ် အခြေခံ၍ အခန်း တစ်ခန်း၊ ပုဒ်မတစ်ခု၊ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်၊ စာလုံးအသုံးအနှုန်းတစ်ခုခြင်းအား အစိုးရ၊ တပ်မ တော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များအားလုံးမှ အသေးစိတ် အကျေအလည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသဘောတူ ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
”အမှန်တကယ်တော့ NCA မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဟာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆွေး နွေးအဖြေရှာတဲ့ နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှုတစ် ရပ်သာဖြစ်လို့ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော် ၇ဝ နီးပါး အဖြေရှာမရသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ် ဖွဲ့ စုပေါင်းတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးအဖြေရှာညှိနှိုင်း ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်း အောင်လှိုင်က ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့် လက်နက်စွဲကိုင်ပြီး မိမိတို့၏လိုအင်ဆန္ဒများအား တောင်းဆို၍မရကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော် ၇ဝ နီးပါးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်အပေါ် သံ ယောဇဉ်အစွဲအလန်းအား ဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံး အာမခံချက်ပေးနိုင် သည့် တစ်ခုတည်းသော အရာသည် NCA စာချုပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှထုတ်ပြန် ထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေ၊ တပ်မတော်အက် ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအား လေးစားလိုက်နာ စောင့်ထိန်းရသည်ဖြစ်၍ အခုတစ်မျိုး၊ တော်ကြာတစ်မျိုး လုပ်ဆောင်၍ မရသည့် အတွက် NCA စာချုပ်ပါ အချက်အတိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် စတင်စဉ်မှစ၍ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများအတိုင်း သွေဖီခြင်း မရှိဘဲ တိကျစွာဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် တိုးတက် ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့်အတူ အိမ်နီးချင်းနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေ ကြောင်းနှင့် အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုသည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်ကို ငြင်း၍မရ ကြောင်း ပြောဆိုသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် နိုင်ငံအနေဖြင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ လုံးဝမရှိဘဲ တည် ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရှိမည်ဆိုလျင်ပင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ အခြားနိုင်ငံများအားမီရန် နှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင်များစွာ ကြိုးစားရုန်းကန်ရဦးမည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြင်းခြံဆေးရုံမှ သုံးရက်သား ကလေးကို ခိုးယူသူအား အမြန်လမ်းတွင် ဖမ်းမိ